Somaliland Siduu Usaamayn Doonaa Ictiraafka Dawlada Maraykanku Siisay Soomaliya:
Wefti uu hoggaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sh, ayaa dhawaan booqday dalka Maraykanka, taasi oo natiijadii ka soo baxday ay noqotay inuu ictiraafo dawlada Soomaaliya. Waxay dadweynaha reer Somaliland is weydiinayaan sidii u saamaynayo ictraafkaasi.
Tan iyo intii ay Somaliland la soo noqotay gooni isku taageeda, Soomaaliya waxa ka dhashay dawlado badan oo aduunku ictiraafay, kuwaasi oo dhawr ahaa, laakiin wakhtigaasi Muqdisho ma deganayn, oo waxaa ka socday dagaalo iyo degenaansho la’aan. Ictiraafkan maanta wuxuu ku soo beegmay wakhti ay muqdisho degan tahay, dawladdo badanina ay taageereen degenaanshaha dalka Soomaaliyeed, inkastoo degenaanshaha ay sugeen dawladdo Africaan ahi.
Fikir ahaan haddii aan ka faaloodo saamaynta uu ku yeelan karo ictiraafkaasi Somaliland waxan u arkaa inaanu waxba ka dhimi Karin, haddii la helo qodobadan soo socda oo ay ku talaabsadaan dhamaan dhinacyada Somaliland sida, Xukuumadda, Golayaasha, Aqoonyahanka, waxgaradka iyo Salaadiinta.
1. Go’aan cad oo lagu midaysan yahay.
2. Isku duubni iyo wada tashi joogto ah.
3. Samir iyo isku-tashi.
4. In miis walba la tego oo lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya, lagana sheego go’aanka.
Somaliland haddii ay fuliso oo ay samir iyo isku duubni la timaado waxba ka dhimi mayo ictiraafkaasi, iyadoo ay jiraan ama imaan karaan arrimo badan oo cidhiidhi galin kara Somaliland, haddana way ka dabaalan kartaa haddii la helo isku duubni,wada tashi iyo samir.
Haddii aan dib ugu noqono arrimaha Soomaaliya waxay ka koobnaan jirtay shan qaybood, qaybtii ugu damabaysay oo ahayd Djibouti, waxay ka badheedhay inaanay Soomaaliya ka mid ahayn, isla markaana ay cadeeyeen inaanu dhulkani ahayn dhul Soomaaliyeed 1977dii, maantana dawlada Jabuuti waxay u sacabo tumaysaa Somaaliya oo ay geysan ciidamo badan, taasi oo ay uga gol ledahay siyaasado kale iyo damac dhuleed,
Guntii iyo gabogabadii waxan halkan uga soo jeedinayaa dadweynaha Somaliland inay isku duubnaadaan oo ay arrimaha soo wajihi doona kaga baxaan samir, dulqaad iyo isku duubnaan.
“Wadajir bay laba gacmood wax karaan” aan wada jiranoo walaalayaal aan isweheshano walaalayaal.
Eng Axmed Cabdilaahi Faarax